भारतमा गाडी बिक्री ह्वात्तै घटयो, नेपालमा के छ अवस्था ? – Clickmandu
भारतमा गाडी बिक्री ह्वात्तै घटयो, नेपालमा के छ अवस्था ?
क्लिकमान्डु २०७६ असार १९ गते १०:३८ मा प्रकाशित
काठमाडौं । पछिल्लो केही महिनामा भारतमा गाडीको बिक्रीदरमा निरन्तर कमि आएको छ । र, यो घट्दोक्रममा तत्काल सुधार हुने संकेत देखिएको छैन ।
गाडीको निकै किनबेच हुने र गाडी पारखीहरु रहेको भारतको यो अवस्थाले नेपाल लगायत भारतीयढ अटो बजारसँग सम्बन्ध हुने मुलुकहरुमा पनि प्रभाव परेको रिपोर्टहरुले देखाएका छन् ।
भारतको सबैभन्दा ठुलो गाडी निर्माता कम्पनी मारुति सुजुकीकोद्धारा उत्पादित गाडीहरुको बिक्रीमा सन् २०१९ को जुन महिनामा मात्रै १७.२ प्रतिशतले गिरावट देखिएको छ ।
गत वर्षको यहि समयमा १ लाख ३४ हजार ३६ वटा प्यासेन्जर गाडी बेचेको मारुति सुजुकी कम्पनीले अहिले जुन महिनामा जम्मा १ लाख ११ हजार १४ वटा गाडी बिक्रीमा चित्त बुझाउनु पर्यो ।
गत वर्षको अप्रिल र जुन महिनाको समग्र बिक्री र अहिलेको अवस्थालाई तुलना गर्ने हो भने २०.८ प्रतिशतले घटेको तथ्याङक छ ।
त्यसैगरी अर्को चर्चित गाडी निर्माता कम्पनी टाटा मोर्टसको पनि हालत खराब देखिएको छ । टाटाद्धारा निर्मित प्यासेन्जर भेइकलको विक्रिको तथ्याङक हेर्ने हो भने यो वर्षको जुन महिनामा २७ प्रतिशतले गिरावट आएको छ ।
घरेलु बजारमा टाटाले जुनमा १३ हजार ३५१ थान गाडी मात्र विक्रि गर्न सफल भएको छ । जबकि गत वर्षको यहि समयको तथ्याङक अनुसार टाटाले १८ हजार २१३ थान गाडी विक्रि गरेको थियो । त्यस्तै यो वर्ष र गत वर्षको अप्रिल र जुन महिनाको विक्रिदर तुलना गर्दा ३० प्रतिशतले विक्रिदरमा ह्रास आएको देखिन्छ ।
तथ्याङक अनुसार गत वर्षको अप्रिल र जुनमा ५२ हजार ९ सय ३७ थान गाडी बेचेको टाटा मोटर्स यो वर्ष ३६ हजार ९ सय ४५ थान विक्रिमा चित्त बुझाउन परेको छ ।
निकै रुचाइएको अर्को गाडी कम्पनी हो हुन्डाई । यो कम्पनीको गाडी विक्रिमा पनि गिरावट आएको छ । हुन्डाई कम्पनीले दिएको जानकारी अनुसार जुन महिनामा घरेलु बजारमा ४२ हजार ७ थान मात्र गाडी विक्रि भएका छन ।
गत वर्षको यहि समयमा हुन्डाईका ४५ हजार ३ सय १४ थान गाडी विक्रि भएका थिए । दुइ वर्षको एकै समयको बिक्री दर अनुपातमा ७.३ प्रतिशतको गिरावट देखिएको छ । तर गत वर्षको तुलनामा हुन्डाई कम्पनीका ९ प्रतिशत धेरै गाडी अन्य मुलुकमा निर्यात भएका छन् ।
सरकारले गाडी आयात र गाडी खरिदमा कडाइ गरेका कारण नेपालमा पनि गाडीको आयात र बिक्री दुबै घटेको हुण्डाइ गाडीका लागि नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टीनेन्टलका कार्यकारी निर्देशक निराकर श्रेष्ठले जानकारी लिए ।
‘समग्रमा नेपालमा गाडीको आयात र बिक्री २० देखि २५ प्रतिशतले घटेको अनुमान गर्छ सकिन्छ,’ श्रेष्ठले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘प्रत्येक वर्ष सरकारले गाडीलाई कडाइ गरेका कारण यस्तो भएको हो ।’
सरकारले गाडी आयातमा २५० प्रतिशतसम्मको चर्को भन्सार शूल्क असूल्दै आएको छ । त्यतिमात्रै होइन, बैंक ऋणमा समेत गडाइ गर्दै आएको छ ।
देशको भुक्तानी सन्तुलन (शोधनान्तर स्थिति) नकरात्मक भएको भन्दै सरकारले गाडी आयातमा थप कडाइ गर्ने नीति लिएको छ । मौद्रिक नीतिले टीआर लोनमा कडाइ गर्ने तयारी गरिरहेको छ । जसले गाडीको आयातलाई निरुत्साहित मात्रै पार्दैन, गाडी किन्नेहरुले थप समस्या भोग्नुपर्ने देखिन्छ ।